Ihe na-eme ka mpempe akwụkwọ bụ ụzọ kacha mma iji wepụ data sitere na weebụsaịtị
Octoparse bụ ihe ngwongwo data bara uru ma dị ike . Ọ nwere ike ịkwalite ma gbanye ntinye mgbalị data gị na ọkwa ọzọ. Octoparse-abịa ma na free na ugwo nsụgharị - access systems uk. Na mbipụta ya n'efu, ị nwere ike iwepu ihe ruru puku ise ibe weebụ ngwa ngwa.
Octoparse na-anakọta ma wepụ data sitere na Ịntanetị ma nwee ihe karịrị mmadụ 150,000 n'ụwa nile. Kemgbe afọ 2014, Octoparse na-enye ndị ọrụ ntinye data nchịkọta data ma gbalịsie ike imeziwanye ebe ọ bụla ọ dị mkpa.
A na-enwekarị data na Intaneti n'ụdị na-adịghị edozi. Na Octoparse, ị nwere ike ọ bụghị naanị nyochaa data gị kamakwa ị nwere ike ịhazi ya nke ọma. Enwere ike ịchọta ozi nwere ike ịghọ ihe ọmụma bara uru, ekele Octoparse maka ime ka o kwe omume. A na-akpọ ụfọdụ n'ime atụmatụ ya ndị dị n'okpuru ebe a.
1. Ọ dị mma maka ndị na-abụghị ndị mmemme
Octoparse na-eme ka ọ dịrị gị mfe wepụ data sitere na ịntanetị n'enweghị ihe ọ bụla mmemme. Ngwaọrụ a bara uru maka ma ndị na-abụghị ndị coders na ndị na-abụghị ndị na-eme ihe nkiri ma na-ewepụta ọdịnaya weebụ site na ma dị iche iche ma na saịtị. Ọzọkwa, ọ na-enye anyị ohere ịchekwa data ahụ dị ọcha. Na Octoparse, ị nwere ike mfe ịgbanye data n'ime API omenala wee nweta nsonaazụ ọchụchọ.
2. Ogologo dị ka ọrụ igwe ojii:
Octoparse bụ ikpo okwu nke ígwé ojii nke na-ewepụta ibe weebụ n'otu oge ma nweta ihe ndị ị chọrọ, ịchekwa oge na ike gị. Ịkwesighi ichegbu onwe gị banyere njedebe ngwaike n'ihi na ngwá ọrụ a adịghị mkpa nyocha ma rụọ ọrụ ya na mgbe niile.
3. Nyochaa ọnụahịa na Octoparse:
Otu n'ime atụmatụ ndị kasịsị iche nke Octoparse bụ na ọ na-enyere gị aka ileba anya ego ma jiri ụdị dị iche iche tụnyere.Ọ bara uru maka weebụsaịtị ịzụ ahịa dịka Amazon na eBay wee nweta data site na saịtị onye na-asọmpi gị mfe. Tụkwasị na nke a, ngwá ọrụ a na-ewepụta data oge-nchịkọta na nzacha ole na ole ma chekwaa ọtụtụ oge.
4. Ọwa na-eduga:
Site na Octoparse, ị nwere ike ịmepụta na-edu ma wuo ndepụta ahịa gị n'ime sekọnd. Ọ dịghị mkpa ịme ihe ọ bụla maka ịmepụta ihe n'ihi na Octoparse ga-ekpochapụ ọtụtụ data na-akpaghị aka. Ọ ga - enyere gị aka ịkwalite ma ọ bụ kpọsaa ika gị n'ụzọ ka mma. Na Octoparse, ị nwere ike melite gị ahịa azum ma nwere ike ime ka mma mkpebi na amụma.
5. Ọ dị mma maka ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi:
Ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi na-achọrọ data ziri ezi mgbe nile ka ha nwee ike ime nnyocha ha. Na Octoparse, ị nwere ike ibelata ọtụtụ ibe weebụ dịka o kwere mee ma nwee ike inweta ozi sitere na akwụkwọ na akwụkwọ akụkọ mfe. Ọ ga - enyere gị aka inweta data bara uru na nke nwere ike ịdaba na oge ọ bụla.
6. Ntuziaka na Point-na-Pịa:
Octoparse kacha mara amara maka njirimara-na-click interface. Igwe ihe omumu ya nke di elu na-achota ma wepu ya na nbudata ole na ole. Naanị ịkwesịrị ịkọwapụta data ịchọrọ ịchọta ma ọ bụ tinye ebe nrụọrụ weebụ Weebụ na ka Octoparse rụọ ọrụ ya. Ọ ga-ejikwa ọrụ arụ ọrụ niile dị na ihuenyo ahụ.
7. Na - arụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla: